Nagarik News - नीतालाई के मन पर्छ ?
Wednesday 12 Jestha, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	कला	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / नीतालाई के मन पर्छ ?
नीतालाई के मन पर्छ ?	04 Aug 2013 | 19:53pm आइतबार २० श्रावण, २०७०
नीता ढुंगाना, अभिनेत्री खान
नेपालीको प्रिय खाना दाल, भात र तरकारी नै मेरो प्रमुख रोजाइ हो। खसीको मासु पनि मलाई मनपर्छ। खाजाहरूमा मःमः रुचाउँछु। विदेशी खाजामा इन्डियन खाजा दही कडी मनपर्छ। यसको अमिलो चट्का स्वादले मेरो जिब्रो नै रसाइदिन्छ। मलाई मनपर्ने फलफूल आँप, स्ट्रबेरी र सुन्तला हुन्। अनार छ भने फ्रेस जुस बनाएर खान्छु। अरू फलफूल छ भने साना टुक्रा पारेर खान्छु। घुम्नघुम्ने क्रममा शान्त वातावरणले ध्यान तान्छ। वरिपरि हिमाल भएको ठाउँ घुम्न मन पराउँछु। सुटिङका क्रममा धेरै ठाउँमा गइरहनुपर्छ। घुमेका ठाउँमध्ये जोमसोम, ओखलढुंगा र पोखरा मलाई मन परेका ठाउँ हुन्। पोखराको बाराही मन्दिर पनि मलाई मनपर्ने ठाउँ हो। कार्य सिलसिलामा मलेसिया, कतारजस्ता बाहिरी मुलुक पनि गएकी छु। विदेशी वातावरणले मलाई उत्ति तान्दैनन्। मलाई नेपाली हावा–पानी नै मनपर्छ। सुन्नम प्रायः मेलोडी गीत सुन्न मन पराउँछु। बेला–बेला ट्रेजेडी गीत–संगीत पनि सुन्छु। कस्तो गीत सुन्ने, मुडमा भर पर्छ। अभिनयसँगै नाच्नुपर्ने भएकाले रक गीत पनि सुन्छु। मुड चलेमा जिउ नै उचाल्ने किसिमका रक गीत पनि सुन्दै आनन्द लिन्छु। यस्ता गीतले माइन्ड रिफ्रेस गर्छन्। 'गहिरो गहिरो' बोलको पुरानो गीत मलाई एकदमै मन परेको गीत हो। अहिलेसम्मकै गीतमा यो मेरो उत्कृष्ट गीत हो। मैले धेरैपटक यो गीत गुनगुनाएकी पनि छु। हिन्दी, इङ्लिस भाषाका गीत सुने पनि मलाई नेपाली गीत नै बढी मनपर्छ।हेर्न कलाकारको नाताले धेरै फिल्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो उमेरसँग मिलेर हो कि, म प्रायः लभस्टोरी फिल्म हेर्छु। कुनै पनि सन्देशमूलक फिल्मले मेरो ध्यान खिच्छन्। अन्य भाषाका फिल्मभन्दा नेपाली फिल्म नै बढी रुचाउँछु। आफ्नो क्षेत्र नै नेपाल भएकाले समकालीन नेपाली फिल्मको टे्रन्ड बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। राम्रा फिल्महरू हेर्न छुटाउँदिनँ। पछिल्लो समयका फिल्म 'सायद' र 'साँघुरो' मलाई मन परेका फिल्म हुन्। आफैंले अभिनय गरेको फिल्म 'मसान' पनि राम्रो छ। म प्रायः हल गएर नै फिल्म हेर्छु। सुटिङका क्रममा कुनै फिल्म छुट्यो भने घरमै ल्याएर हेर्छु। हलमा जाँदा प्रायः साथीहरू र परिवारसँग जान्छु। फुर्सद छ भने म भाइसँग पनि हल पुग्छु। पढ्न मलाई उपन्यास पढ्न मनपर्छ। आफ्नो उमेर मिल्दो लभ स्टोरी पढिरहन्छु। पुस्तकमा मोरालिटी भयो भने झन् रमाइलो हुन्छ। पछिल्लो समयमा हरिवंश दाइको आत्मकथा 'चिना हराएको मान्छे’ पढ्दै छु। पढेका पुस्तकमध्ये तसलिमा नसरिनको 'आइमाईको कुनै देश छैन’ मलाई मन परेको किताब हो। मैले महात्मा गान्धीबारे लेखिएका थुप्रै पुस्तक पनि पढेकी छु। नेपाली साहित्यमा मलाई विज्ञान कथा पढ्न मन लागिरहेको छ।प्रस्तुति : क्रान्ति पाण्डे « मुकेश र कल्पना पतिपत्नी !
प्रेमिकासँग आर्यनको जन्मदिन »
नक्कली प्रमाण पेश गरी जागिर खाएको आरोपमा सईविरुद्ध आरोप पत्र दायर मैले अनावश्यक सुरक्षाकर्मी लिएको छैनः बाबुराम इन्डियन टेरेनको सोरुम ललितपुरमा एक किलो सुनसहित दुई भारतीय पक्राउ कालिगण्डकी बन्द भए पनि लोडसेडिङ नबढ्ने प्रतिक्रिया
पचास वर्ष धकेलिए नारायण!काठमाडौं– भूकम्पका कारण लेखक नारायण ढकालको नयाँ उपन्यास ‘वृषभ वध' विमोचन नगरीकनै बजारमा आएको छ। प्रकाशक फाइन प्रिन्टले विमोचनको तयारी गर्दै गर्दा भूकम्प आएको थियो। पाठकको मागका कारण पुस्तकलाई ढिलो...	सिनेमा हलमा दर्शक फर्कंदैकाठमाडौं-महाभूकम्पको पराकम्पनले तर्साइरहे पनि सामान्य मर्मतसम्भारपछि केही सिनेमा हलहरु सुचारु हुन थालेका छन्। राजधानीका विश्वज्योति, गोपीकृष्ण मुभिज, पुष्पाञ्जली, क्युएफएक्स अन्तर्गतका जयनेपाल र कुमारी, बिग सिनेमा, राइजिङ मलस्थित क्युज सिनेमाज् लगायत...	परदेशिनेहरुका ‘जिम्दा सपना’काठमाडौं– राजधानीको कालिकास्थानस्थित सर्वनाम रंगमञ्चमा राज शाह लिखित–निर्देशित ‘जिम्दा सपना’ मञ्चन भइरहेको छ। नाटकले बोकेको कथाका कारण दर्शकहरुले यसलाई रुचाइरहेको निर्देशक राजले बताएका छन्। ‘हामीले भारी–भरकम कुनै विषय उठाएका छैनौँ,’...	‘अझै पनि' र ईशाको जम्काभेटकाठमाडौं– नेपाली फिल्म ‘अझै पनि' युनिटले बलिउड अभिनेत्री ईशा देवललाई भेटेको छ। प्रचारप्रसारका लागि भ्रमणमा रहेको फिल्म टोलीले पोखराबाट फर्कने क्रममा कुरिनटारमा रहेकी ईशालाई सोमबार भेटेको हो। भेटमा ईशाले नेपाली...	मलिना बन्ने भो ‘झम्की'काठमाडौं– पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशी ‘ऋतु'पछि फेरि अर्को फिल्म ‘झुम्की'मा नायिका बन्ने भएकी छन्। सोमबार काठमाडौंको मण्डला थियटरमा निर्माण घोषणा भएको ‘झुम्की'बाट ‘ऋतु' फिल्मका एक निर्माता अपिल विष्ट निर्देशनमा...	सिम्पल र स्वीट 'जेरी'यात्राले मान्छेलाई धेरै थोक सिकाउँछ। जेरीले पनि सिक्छ। मुस्ताङसम्म तन्किएको घुमफिरमा उसले थुप्रै हन्डर खान्छ र आफूलाई चिन्ने अवसर पाउँछ।मुस्ताङलाई फन्को लगाउने क्रममा जेरी (अनमोल केसी) र काठमाडौंकी किशोरी आकांक्षा...	रत्‍नजीत र सरादेवी च्याम्पियनकाठमाडौं- साविक विजेता रत्‍नजीत तामाङले चौथो पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्याशङकिङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा उपाधि रक्षा गरेका छन्। आर्मीका रत्नजीतले आइतबारको फाइनलमा त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा आफ्नै क्लबका विकास श्रेष्ठलाई...	कला	भारत युवतीका लागि असुरक्षितः अभिनेत्री प्रियमणिमुम्बई–दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रियमणिले युवतीहरुका लागि भारत सुरक्षित नभएको बताएपछि अहिले चौतर्फी वहश सुरु भएको छ।...	सिर्जनाको रोजाइमा फिल्मभन्दा पहिला थिएटरकाठमाडौं– मिस नेपाल २०१६ प्रतियोगिताको टप फाइभमा पुगेर मिस नेपालको उपाधि दावेदार रहेकी मोडल सिर्जना रेग्मीले...	'कलाकार प्रकृतिको नजिक रहनुपर्छ'काठमाडौं-भारतीय कलाकार जतिन दासले अहिलेको आधुनिक कलाले प्रकृतिको साथ छाडेको भन्दै चिन्ता जनाए। नयाँ पिँढीका कलाकारले...	बेलायत जाने 'ह्याम्लेट'लाई सत्यमोहनको आशीर्वादकाठमाडौं– इङल्यान्डमा भइरहेको अल्केमी फेस्टिभलमा नेपाली रंगकर्मीहरुले 'ह्याम्लेट' नाटक देखाउने भएका छन् । गत जेठ ६...	भर्खरै...
एक किलो सुनसहित दुई भारतीय पक्राउ
२६ दलाल पक्राउ परेकै रात यातायात कार्यालयमा तोडफोड
सलमानले बिहे गर्ने!
Saturday, 21 May 2016 16:07
फुटुङमा भेटिए 'अनागत' अभिनेत्री प्रियंका र अर्पण
Thursday, 19 May 2016 10:46
बलिउडकर्मीको बाल्यकालको सम्झना
Thursday, 19 May 2016 12:15
बल्ल बोलिन् ज्याकलिन
Saturday, 21 May 2016 15:46
घाइते भइन् प्रियंका
Thursday, 19 May 2016 12:05
दिल धड्किन्छ आफ्नै ढंगमा17-06-2015 दीपेन्द्र लामाबलिउडरुपी समुद्रमा हरेक वर्ष दर्जनौं जहाज यात्रामा निस्किन्छन्। तर, सबैले यात्रा पूरा गर्दैनन्। कतिले बाटो बिराउँछन् त कति समुद्रमै विलीन...	एक अर्गानिक खुराक 'सुन्तली'16-02-2015 दीपेन्द्र लामाभारतबाट नेपालको पहाडतिर क्रिकेट खेलमात्र भित्रिएको छैन। बेलाबखत भयानक गुण्डाहरुको पनि घुसपैठ भइरहन्छ। फिल्म 'सुन्तली'मा यस्तै हुन्छ। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट...	सिम्पल र स्वीट 'जेरी'25-11-2014 दीपेन्द्र लामायात्राले मान्छेलाई धेरै थोक सिकाउँछ। जेरीले पनि सिक्छ। मुस्ताङसम्म तन्किएको घुमफिरमा उसले थुप्रै हन्डर खान्छ र आफूलाई चिन्ने अवसर पाउँछ।मुस्ताङलाई...	दर्किन्छ झरी, रुझ्दैनन् दर्शक!29-04-2014 दीपेन्द्र लामानेपाली निर्माताहरु फिल्म बनाउन ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्चेको गफ दिन्छन्। फिल्म हेर्दा सही ठाउँमा लगानी गरिएको पाइँदैन। फिल्मको मेरुदण्ड मानिने...	खच्चड होइन, लोकल घोडा!28-04-2014 दीपेन्द्र लामा'होइन ओ दाइ, यो घोडा हो कि खच्चड?' फिल्मभित्र निश्चल बस्नेतले सोधेको यो प्रश्न वास्तवमा त्यस्ता नेपाली फिल्मकर्मीप्रति लक्षित देखिन्छ,...	छुटाउनु भयो कि	चुरेमा फेरि विनाशलीलाकाठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) व्यवस्था खारेज गरेलगत्तै चुरे क्षेत्रमा फेरि विनाशलीला सुरु...	बलात्कृतलाई निरन्तर 'पीडा'दोलखा- मेलुङकी १४ वर्षीया किशोरी गत माघको एक साँझ गाउँकै एउटा विवाह भोजबाट घर फर्कदै थिइन्।...	दाइजो नदिँदा छोरी 'गायब'वीरगन्ज- दाइजोको माग आफूहरुले पूरा गर्न नसकेपछि छोरीलाई बिहेको पाँच वर्षपछि उसका ससुराल पक्षले गायब पारेेको भन्दै...	यौन जिज्ञासा मेट्न बलात्कारकाठमाडौं- राजधानीका बाह्रवर्षे एक बालकलाई जब वयश्क छिमेकीले मोबाइलमा अश्लील सिनेमा देखाए, उनको बालमस्तिष्कमा त्यसको गहिरो...	नेपाललाई प्राज्ञिक केन्द्र बनाउने उद्‍घोषलुम्बिनी- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी गुरुयोजना छिटो सम्पन्न गरेर समग्र लुम्बिनीक्षेत्र विकासमा अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह...	Nagarik News